ကြက်ကလေး၊ငှက်ကလေးကို သတ်သလိုလွယ်လှပါလား ( ကလေးများ မကြည့်ရ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » ကြက်ကလေး၊ငှက်ကလေးကို သတ်သလိုလွယ်လှပါလား ( ကလေးများ မကြည့်ရ)
ကြက်ကလေး၊ငှက်ကလေးကို သတ်သလိုလွယ်လှပါလား ( ကလေးများ မကြည့်ရ)
- ေအး၀တီ ၾကီး
Posted by ေအး၀တီ ၾကီး on Jun 4, 2012 in Contributors, Myanma News, News, Science & Religion | 123 comments
ေတာင္ကုတ္က လူမဆန္သူမ်ား လက္ခ်က္
(၁) မဆိုင်သူများ အသတ်ခံရသောကြောင့် မည်သို ့အရေးယူပေးမည်နည်း။
ငါးပါးသီလကို ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး တရားလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
သီလဆိုတာ စည်းကမ်းဖြစ်လို့ လူတိုင် ဘာသာတိုင်နဲ့ စောင့်ထိန်းရမယ် အရာလို့ ထင်ပါတယ်။
(၁)ပါဏာတိ ပါတာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ…ဆိုတာသူတစ်ပါးအသက် ကိုသတ်ခြင်း
ရှောင်းကြဉ်ရတာ ဖြစ်လို့ အခုခေတ် သက်ဖြတ်နေကြတာဟာ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါ။
(၂)အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ ဆိုတာကသူတစ်ပါးပစ္စည်း ကိုခိုးယူခြင်းလို ပြောပေးမဲ့
သူတစ်ပါးရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို စိတ်နဲ့ ကြံမိရင်တောင် အဒိန္နာဒါနာ ကံမြှောက်ပါတယ်။
လောကကြီးမှာ ခိုးမူဆိုတာ မရှိရင်လည်း ငြိမ်းချမ်းပါတယ်။
(၃)ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ ကာမဂုဏ်တို့၌ ကဲ့ရဲ့ထိုက်အောင်
မှားယွင် ကျင့်သုံးနေကြသော လူလောက ကြီးမှာ ဘယ်လိုအေးချမ်းနိုင်ပါမလဲ…
(၄)မုသာဝါဒါ ဝေရမိဏိသိက္ခာ ပဒံ သမာဒိယာမိ မဟုက်မမှန်သောစကားကို ပြောဆိုခြင်းမှာ ရှောင်
(၅)သုရာ မေရယ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ သေရည်အရက်သောက်ခြင်းမှ ရှောင်
ကြဉ်နိုင်ကြရင်လည်း လောကကြီးမှ မကောင်းမူတွေ ကင်ဝေတာပေါ့နော်..
ပါဏာတိ ပါတာ ပြုလျက်သူ သူအသက်ကို သတ်သောသူသည်..
(၁)မျက်စီ နား နှာ အဂါင်္ ခြေလက် ချို့ယွင်းတက်ခြင်း…..။
(၂) ဖြစ်ရာဘဝ၌ ရုပ် အသွင် မွဲပြာခြောက်ညှို့း၍ စိုစိုပြေပြေမရှ်တက်ခြင်း။
(၅)ဘေးရန်ပေါ်ပေါက်လျင် ကြောက်ရွံ ့ခြင်း
(၆)သူများသတ်တာ ခံရတက်ခြင်း ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် အဆိပ် စသည်စားလျှက် သေရခြင်း
(၉)အသက်တိုတက်ခြင်း များပြားလှတဲ့ အပြစ်တွေ ခံစားရတက်ပါတယ်။။။။။။
အဒိန္နာဒါနာ ပြုသူသည် ဥစ္စာနည်း မွဲ ဆင်းရဲတက်သည် လိုရှိမရ ဘောဂပျက်စီး ရေ မီးသူခိုးမွေခံဆိုးနှင့် မင်းဆို
အပြား ရန်မျိုးငါးကြောင့်ပျက်ပြားဥစ္စာ အပြစ် များစွာသည် ၊ရှောင်ခါအပြန် အကျိုးတည်း။
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ မိစ္ဆာစာရ ကျုးလွန်ကလည်း မုန်းကြသူများ ရန်သူပွား၍ ရှားပါးလာဘ်တိတ် ချမ်းသာဆိ်တ်၏
က္ကုတိပဏ္ဍုက် မျိုယုတ်ခါခါ မျက်နှာမလှ အရှက်ရလျက် လက္ခဏန္ဒြေ ယွင်းသွေ ချို့သိမ့် စိုးရိမ်များစွာ ချစ်သူကွာသည် ၊
ရှောင်ခါ အပြန် အကျိုးတည်း။
မုသာဝါဒါ ကျုးလွန်ကာ စကားမပီ သွားမညီ ပုပ်ညှီ ပါးစပ် ခြောက်ကပ် ကိုယ်ရေ က္ကုန္ဒြေနောက် ပုံယွင်း
ဖောက်၏ မရောက်ဩဇာ နှုတ်လျှာ ကြမ်းထော် လျှပ်ပေါ်လော်လီ စိတ်မတည်သည် ရှောင်ကြဉ် အကျိုးတည်း။
သုရာ မေရယ ကျုးလွန်ကာ သင့်မသင့်၌ ရေးခွင့်မသိ ပျင်းရီမေ့ရှုး ကျေးဇူးမဆပ် ဟိရောတ္တပ်ကင်း ခပင်းများထို အကုသိုလ်
ကိုပြုကျင့်လွယ်၏ ရှောင်ခါ အပြန်အကျိုးတည်း။
ဝတီအကျဉ်ချုပ်လိုက်တာပါ…. ငါးပါးသီလသည် အခုဘဝ နှောင်သံသရာ အတွက်ပါ အကျိုးများ၍ ရှောင်ကျင်
လိုက်နာသင့်သော လူစည်းကမ်း ပါ.။
သေရည်အရက်သောက်စားခြင်းသည် လေးပါးသော အပြစ်ကို ကျုးလွန် ဖို့လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်…
ကမ္ဘာကြီးကို အေးချမ်းမူမပေး နိုင်ရင်တောင် ကိုယ့်နဲ့ ပက်သက်သူတွေ အေးချမ်းစေ မှာပါ။
ငါးပါးသီလစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ပက်ဝန်ကျင် မိသာစု တိုုင်းပြည် မြို့ ရွာ အေးချမ်းစေပါတယ်။။။
About ေအး၀တီ ၾကီး
ေအး၀တီ ၾကီး has written 12 post in this Website..
View all posts by ေအး၀တီ ၾကီး →
Phyo Aung says:
San Tun Kyaw says:
shwe pont says:
ကျွန်မက 100% ရခိုင်လူမျိုး စစ်စစ်ဖြစ်ပါရေ။
ကိ်ုဆန်းထွန်းကျော် …. ခင်ဗျားရဲ့အပြောအဆိုအရေးအသားကိုကြည့်ရတာ ရခိုင်အစစ်ဖြစ်ပုံမရဘူး …… ပွဲလန့်တုန်းမှာ ဖျာဝင်ခင်းတဲ့ ရခိုင်-ဗမာကို သွေးထိုးပေးမဲ့ တစ်ခြားသောလူမျိုးစုဖြစ်ရမယ်…..
ဘာကြောင့်တုန်းဆိုတော့ …… ဥပမာ …. ငါကသာ ရခိုင်ကိုမုန်းတီးတဲ့ မွတ်ဆလင်တစ်ဦးဆိုပါဆို့ (မွတ်ဆလင်တိုင်း ရခိုင်ကိုမုန်းတယ်လို့မဆိုလိုဘူး) …… ဒါဆိုရင် ဒီလိုအချိန်မှာ ငါမင်းပြောတဲ့စကားမျိုးကိုပြောမိမှာပဲ …… “ငတို့ရခိုင်ကမြန်မာသားမဟုတ်ဘူးရခိုင်ကငါတို့ပြည်နင်တို့ခွီးဗမာတွေကမတရားသိန်းထားတာ” ဒီကွန်းမန့်အောက်မှာ သေသေခြာခြာမစဉ်းစားတတ်တဲ့ ဗမာတွေ ဘယ်လိုဆက်ပြီး ကွန်းမန့်တွေဝင်ပေးမလဲဆိုတာကို မင်းကြိုသိမှာပါ ………………………… လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေနောက်မသုံးစေချင်ဘူး ……..
win naing says:
အဲဒါမင်းတို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ စောက်သုံးမကျလို့ဖြစ်ရတာ.. မင်းတို့ညီမတွေကို ဗမာစစ်သားတွေကို အပ်လိုက်ကြပေါ့ကွာ..
ဇောက်ထိုး မိုးမျှော် သခင် ကိုယ်တော် says:
ဒေသခံ တွေနဲ့ဒီနေ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရ သတင်းတခုထူးတယ်
စီးပွါးရေးအရ ထိုးနှက်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပုံရနေပါတယ်
ကိုယ့်ထက်သာ မနာလို စကားပုံအရ ဂိတ်ပြိုင်တစ်ဦးမှ သတင်းပို့ပေးရာမှ
အခုလို အဖြစ်ဆိုး ဖြစ်ခဲ့ရတာပါလို့ သိရတယ်
ခွီးဗမာဇောက်ထိုး မိုးမျှော် သခင် ကိုယ်တော်မင့်ပထွေးခွေးကုလားတွေကတို့
စံထွန်းကျော်.. မင်းက ရခိုင်မွေး. ရခိုင်မှာကြီးတာလား. အေး. မင်းဗမာ. လူမျိုးကရော ဘယ်ကလာ. ဘယ်ကကြီးလဲဆိုတာကို မင်းသိလား. မင်းမှာ အမိအဖရှိလား. မရှိရင်းတော့ ငါပြောပြချင်တယ်. တကယ်တော့ ငါတို့ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ဗမာလူမျိုးက တကယ်တော့ အိနိယကနေ ရောက်ရှိလာတဲ့ ကုလားလူမျိုးအစစ်တွေပေါ့ကွာ..ငါက တကသိုလ်တစ်ခုမှ သမိုင်းဌာနမှာကတိကလုပ်နေတော့ မင်းလို့ချင်တာ သိချင်တာရင် ငါကိုလာပြီး ဆွေးနွေးပါ. စံထွန်းကျော် မင်းကို ကြိုဆိုပါတယ်.
Ar Ri says:
ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးသူတွေပါ၊ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူတွေပါ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဆိုပေမယ့်၊ ဘာ ပဌိပက္ခမှ မရှိပါဘူး၊ လူတွေအမြင်မှာ ရခိုင်တွေကို ဆိုးသွမ်းတဲ့လူတွေအဖြစ်မြင်ကြလိမ့်မယ်။ ခံရတာ ကျွန်တော်တို့ဘာ၊ သမိုင်းတစ်လျေက်လုံး လူမဆန်စွာ အသတ်ခံခဲ့ရတာ ကျွန်တော်တို့ပါ…… ဒါတွေကို ပြန်မပြောချင်ပါဘူး ။ ခုဖြစ်ရတာက ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို မသီတာထွေး ကိစ္စတွေကြောင်း မြန်မာတစ်ပြည်လုုံး ဒေါသထွက်နေကြတာပါ……. အာဏာပိုင်တွေဘက်ကလဲ စင်တင်ဘာအရေးခင်းမှာ လူ ၃၀၀ဝ လောက်ကို နှင်ထုတ်နိုင်ပေမယ့် ကုလားတွေတိုက်ခိုက်တဲ့ ရခိုင် ၂၀ဝ လောက်ကို မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတာ စဉ်းစားစရာတွေပါ….. အားလုံး သတိရှိကြပါ….. ငြိမ်းချမ်းပါစေ ရခိုင်ပြည်နယ်……..
Ar Ri ပြောတာထောက်ခံတယ်
ကိုစံထွန်းကျော်….. အကို့ရဲ့ဒေါသကို စာနာနားလည်ပါတယ်။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ဟာပြောပေးပါ ခင်ဗျား၊ ကျေးဇုတင်ပါတယ်။
zesays:
ဒီလို နယ်ချဲ့လာတဲ့ကောင်တွေ မရှိမှ ကောင်းမှ ဖြစ်နိုင်ရင် ကုလားပြည်ကို ပြန်ပို့ချင်တာ … မြန်မာတွေလဲ သူတို့ဘက်ကဝင်နာပေးမနေနဲ့ ဒီထက်တောင်ပိုလုပ်သင့်သေးတယ်…
အဲဒီ ကုလားတွေကို အကုန်မျိုးဖြုတ်ပစ်ရမှာ….
သစ်ထူးလွင်မှာ ဒီလိုတွေ ့တယ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်အတွက် အထူးထုတ်ပြန်ချက်လွှင့်မယ်တဲ့
SOE THUYA says:
Is there any body who currently in Middle east countries?
Don’t worry soe thuya, Religion of Islam teaching good thing and Buddha too. But these Rakhine people are useless and like animals (better send them to jungle). We need to protect all religion and peace the world as well as our nation too.
ဒေါတ်တာ သရဲလေး says:
ဟုတ်တယ် လေရခိုင်ဆိုတာဘာကောင်လဲဆိုတာသိပိမလား လာမထိနဲ ့ထိတာနဲ ့တွေတာဘဲလေ ရခိုင်တဲ ့နာမည်တစ်လုံးတဲ ့နဲ ့နေတာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အားတော့နာပါတယ် ရို်င်းသွားရင်တော့အားနာပါတယ် ကုလားတွေကိုလီးဘဲ စောက်ဆင့်မရှိတဲ ့ကောင်တွေ အကြင့်ယုံတ်တွေ….
အေးဒီထဲ မှာလဲကုလားတွေပါပါလေ့မယ် စကားကိုကြည်ပြောနော် စောက်ကုလားတွေ
မင်းတို့လူအနည်းစုကိုပဲ အနိုင်ကျင့်လို့ရမယ် ကုလားဇလဲပြမယ်
ရခိုင်က ကုလားတွေကို လုပ်ပလား ခရီးသွားတွေကိုလုပ်တာ အနိုင်ကျင့်တာ
အေးဝတီ ကြီး says:
ကွန်မန် ့ပေးသူတွေထဲမှာတောင်ကုတ်ရခိုင်ဖက်က အမျိုးယုတ်တွေ၊အဆင့်အတန်းမရှိသူတွေရဲ ့ကွန်မန် ့တွေမြင်နေရတာ
စိတ်ပျက်တယ်။ရခိုင်မြေက ဗုဒ္ဓသာသနာမြေဆိုတာ ဟုတ်ရဲ ့လား။ဘုရားက ခုလိုလုပ်သူတွေကို ခွင့်လွှတ်သလား။ခုလို
လွန်ကျူးကြတဲ့ တောင်ကုတ်သားတွေ ကိုယ့်မြို့မြေပုံပေါ်ကပျောက်သွားနိုင်တာကို မမေ့သင့်ဘူးမလား။ဒါကြောင့် အရင်
ကကို ပညာရေး၊စီးပွားရေးလူမှူရေး အောက်တန်းကျ အဆင့်မမှီတဲ့မြို ့၊ခုတော့ ပြောစရာမလိုတောူ့း။
နောက်တစ်ချက်-တောင်ကုတ်မြို ့က အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာ DVB သတင်းထောက်တွေ ဓါတ်ပုံ၊ဗီဒီယိုဖိုင် ရိုက်ယူထား
လိုက်နိုင်တယ်လို ့မီဒီယာ အသိုင်းအဝိုင်းကနေ ပြောကြတယ်။
rachine thar says:
kalar phinkhan myomasit အေးဝတီ ကြီး so tat thantway thar min ko min de post tin pye thate hote tat media thamar kyi phyit nay pyi ma htan nag .min lo myo ma sit kaung tway rachine mhar mhar shit la rachine pyi nit nar la pal.
ဟေ့ကောင် ဒီအဖြစ်ဖြက် လုံးဝမမေ့ဘူး ငါတို့တွေမင်းတို့တွေကို ချေမှုန်း မယ်
minn zaw says:
ဟေ့ကောင် ချေမှုန်းမယ်ပြောရအောင် မင်းက ဘာကောင်လဲ။
စကားလုံးကိုကြည့်သူံး။ မင်တို့ကောင်တွေ ယုတ်မာခဲ့တာတွေ မနည်းဘူးနော်။
ငါတို့မြေမှာလဲ နေသေးတယ်။ မင်းကချေမှုန်းမယ်ဆိုတော့ မင်းတို့က အိမ်ရှင်လား။
အရင်အစိုးရတွေ အသိဉာဏ်မဲ့ခဲ့လို့ မင်းတို့ကောင်းကောင်းနေ နေရတာ။
စကားပြောတာ ကြည့်ပြော အမျိုးပြုတ် သွားမယ်။
dt 1 says:
ဟေ.ကောင် စိုးသူရ ကုလားနဲ.ငါး အရုပ်ရေးပြရမယ်တဲ.မင်းကြားဖူးတယ်မလား မြန်မာနိူင်ငံ ကဗုဒ္ဒဘာသာနိူင်ငံ မွတ်ဆလင်နိူင်ငံမဟုတ်ဘူး စာအုပ်ထဲ က အရုပ်လေး ဖြစ်သွား မယ် ဘာမှတ်နေလဲ
ပိုးစိုး ပက်စက်တွေပါလားကွယ်ရို့ …
ကလေးများ မကြည့်ရ ဆိုတာထက် ..
သွေးလန့်တတ်သူများ၊ ဆိုးဆိုးရွားရွား မကြည့်ချင်သူများ မကြည့်ရလို့ ရေးရင် ပိုသင့်မယ် ထင်တယ်ဗျ ..
ဒီရွာထဲမှာ ကလေးတွေမှ သိပ်မရှိတာ ..
ဒီရွာ (Mandalay Gazette) ကို အုပ်ချုပ်တဲ့လူ ..
ကျုပ်တို့အခေါ် သဂျီးမင်း (Kai) က ရွာထဲမှာ ဆဲခွင့် မပြုထားပါဘူး ခင်ဗျာ …
ဒါကြောင့် ယဉ်ကျေးပါ …
ဒါက ခင်ဗျားရဲ့ ပထမဆုံး ကွန်မန့်မို့ ကျုပ်က သတိပေးတာပါ။
aung moe says:
ငါလိုးမသား လီးဖြစ်နေတာလား ဗမာတွေလို့ပြောရအောင် မင်းအမေလိုးသွားလို့လား
Potter Herry says:
ခက်လိုက်တာရခိုင်သားလေးတို့ရေ အသုံးအနှုံးလေးတွေကိုတောင် မဆင်ခြင်နိုင်ကြတော့
လောက်အောင် အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ် ပြသနေကြပါရော့လား ။
ဒီပို ့စ်မှာ မန် ့တော့ဘူးလို ့နေတာ။ကြည့်မရတော့လို ့ဝင်ပြောမယ်။တစ်ယောက်က အေး
အေးဆေးဆေးပြောလို ့၊အင်တာနက်တင်ခံရလို ့နာတဲ့သူက ဝိုင်းဆဲလို ့။တရားကျတယ်
ပြောလိုတာကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောတတ်ဖို ့ရာမွေးလာကတည်းက တတ်ခဲ့ကြဟန်
မတူပါလားကွယ်ရို ့။ထပ်ပြီး သိက္ခာကျအောင်မလုပ်ကြတော့နဲ ့။ခုတောင် ရခိုင်ဆို ကမ္ဘာ
လုံးက ချဉ်ဖတ်ဖြစ်နေပီ။ကိုယ့်မြေ၊ကိုယ့်ရေ၊ကိုယ့်သာသနာကို စောင့်ရှောက်ဖို ့ထားပါအုံး
ငါလိုးမသား. တောင်ကုတ်သားခွေးတစ်သိုက် မင့်အမေကို ဖင်လိုးနေတယ်များမှတ်နေသလား။မင်း
တို ့ခွေးဇာတ်ခင်းလို ့အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ပွလန်ကျဲနေပီ။မင်းတို ့သောက်ရှက်မရှိ
လုပ်ချင်ရာလုပ်ခဲ့တာ တိုင်းသိ၊ပြည်သိ၊ကမ္ဘာသိဖြစ်နေပီ။ဘာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ကောင်တွေ
လဲ။ကိုယ့်ရပ်၊ကုယ့်ရွာ လာလည်သူကို ဧည့်ဝတ်ကျေအောင် ရိုက်သတ်တာ မင်းတို ့မြို ့တမြို ့ဘဲရှိတ
ယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကို အရောင်ဆိုးနေတဲ့ ငါလိုးမသား ခွေးတသိုက်ရေ။အဲ့လူတွေက မင့်အမေ ဖင်ချသွား
လို ့အဲလောက် ဧည့်ခံကောင်းရသလား။
thu totamay ma hote phu minamay phincha twar lot latsar cha pay tar ait khan ra tot mat nwar yat .
မင်း အမေ ဖင်ကိုချသွားလို. ဧည်.ခံပေးလိုက်တာ ကွ မင်းညီမဖင်ချသွားရင်ဒါထက်ဧည်.ခံပေးအုံးမှာ
မကြာမီမှာ. ခွေးတွေနေတဲ့ မြို ့ကိုသန် ့သွားအောင်လုပ်ပေးလိမ့်။ဒါဟာ သမ္မတအမိန် ့ဘဲ။မင်းတို ့အဖေ ဗိုလ်ကျောက်လဲ
မကယ်နိုင်တော့ဘူး။မင်းတို ့နဲ ့ထိုက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်လာမှာဘဲ။တောင်ကုတ်မြို ့ကိုသမိုင်းမှာ အရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်အောင်
တဲ့ တန်ကြေး တန်အောင်ဆပ်ဖို ့ပြင်ထားပါ။ပထဝီမြေပုံထဲက မြို့တမြို့ပျောက်သွားဖို ့မလိုလားပေမယ့်၊ခွေးထက်မိုက်တဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အောက်တန်းအကျဆုံးမြို ့၊မြန်မာပြည်မှာ အရက်စက်ဆုံးမြို ့ဖြစ်အောင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူတွေဘဲ၊ကိုယ့်
အလှည့်ကျ အပ်ဆူးမှာကို ကြောက်နေသလား။
kalar phin khan thandway myo ka ko nwar kyi အေးဝတီ ra တာင်ကုတ် so tat myo mhar taungout thar ka nal nal kyantar tway ka rachine ta tine lone ka lar pye sepwar shar sar nay kya tat khin byar pahtway rachine thar twa lal amyar kye so tar ma mat bar nag kalar leesar nay tat bal kyi ra. kinbyar lal thantway mhar kyut nay tat lee kalar pal pyat mhar par hote tal ma lar
ဘိုး ဘိုး အောင် says:
အင် တာနက် မှာ ဟုတ် တာတွေ ရော မဟုတ် တာတွေ ရော တွေ့မြင်နေရ တယ်။ မမှန် သတင်း ပြော ဘေး တီး တာတွေ စကောလောက် ဇောက် မနက် တဲ့အတွေး အမြင် နဲ့ထင် ရာစိုင်း ရိုင်း ပြ ဆဲ ဆို နေကြတော့ ခု လို အဖြစ်မျိုး ဖြစ် လာရတာပေါ့ ။တောင် ကုတ် အဖြစ် မျိုး ကတော့ ရာဇဝင် တင်ရတော့ မယ့် အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက် လူ ယုတ်မာ တွေ ရဲ့လုပ်ရပ် မျိုး ပါပဲ ။မင်း မဲ့ တိုင်းပြည် ဖြစ် နေတဲ့မြို့ပါ ။ စီး ပွားရေး လူ မှု ရေး ပညာရေး တွေ ရအောင် အဲ ဒီ မြို့ကို ဘယ် သူ သွား ရဲ ဦးမှာလဲ ။ ဒီ တစ် ခေါက် ငပလီ သွားရင် လေ ယဉ် ပဲစီးတော့ မယ်။
Huawei User says:
kalaa daing ka daut Soe nay da ma hout pa buu bya. Ma kaung dai kalaa shi da loe, kaung dai kalaa lai shi ba tai bya, Kalaa daing koe LEE pai lo pyaw da taw kaung dai lo Ma thin ba buu bya, Pi daw kyun daw toe bamaa bataa ma lai, tu da baa ei ba daa ko Yaing Yaing Saing Saing pyaw loe ya dai loe Permision Ma pay htha ba buu. Pyaw ya mai soe yin daw, Kyun daw toe Bamaa lu myo ma laai, ma kaung dai lu myoo twayamyaa gyi shi ba tai bya.
It’s true dat those Rohingers who did sth silly things lyk dis should be Punished as bad as possible, Or they should also be KILL in very bad way.
mandalay gazette မှာမကြုံဖူးတာတွေ တွေ.နေရပြီ။ နေရာတကာမှာ အဆိုးဝါးဆုံးတွေ ဖြစ်နေတာ လူမျိုးရေးနဲ. ဘာသာရေးကြောင်.ပါ။ လူတယောက်ချင်းစီအနေနဲ.ပဲ မြင်ကြည်.လို.မရဘူးလား။ ခွဲခြားပြီး မြင်နေရင် ဘယ်တော.မှ ပြီးတော.မှာမဟုတ်တော.ဘူး။ ကိုယ်.လိုပဲ သူ.ဘက်ကမြင်မှာပဲ။ နှိုင်ငံတကာမှာလဲ အဲဒါကို အပြင်းအထန် ဆန်.ကျင်နေကြပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကို ကြိုစဉ်းစားပြီး ရေးသင်.၊ ဆွေးနွေးသင်.ပါကြောင်း အကြံပေးချင်ပါတယ်။
mandalay gazette မှာဖတ်နေ၊ ရေးနေ၊ ဝင်ဆွေးနွေးနေ တဲ.လူတွေက အရွယ်ပေါင်းစုံ ပါဝင်နေမှာပါ။ ရိုင်းစိုင်းလွန်းတဲ. စကားလုံးတွေ မသုံးဖို.တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေကို ဘယ်ဘာသာ၊ ဘယ်လူမျိုးမှာမှ အားပေးမထားပါဘူး။
Ster 100% agree with you ..
Kaung Myat Kyaw says:
ကောမန့်တွေဝင်ဖတ်နေတာကြာပါပြီ မနေနိုင်လို့ ဝင်ရေးဖြစ်တာပါ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေ စကားပြောတာ
တော်တော်ကိုရိုင်းပါတယ်။ တောင်ကုတ်ရခိုင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ် အတွက် တစ်ချို့ရခိုင်တွေက ထောက်
ခံရေးနေတာမြင်ရပါတယ်။ Facebook မှာလဲ အဲဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာ အများစု
က နိုင်ငံခြားမူဆလင်တွေ ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို ကန့်ကွက်ရှုံ့ချ ရွံလွန်းနေတာ အားလုံးသိပါတယ်။
မသီတာထွေးကို မုဒိမ်းကျင့် ရက်ရက်စက်စက်သတ်တာကိုလဲ တော်တော် အော့နှလုံးနာပါတယ်။
အခု တောင်ကုတ် ရခိုင် တွေရဲ့ လုပ်ရပ် က ရှုံ့ချ ရုံနဲ့မပြီးတဲ့ ဗမာ့ အမျိုးသားရေးပါ။ တစ်ပြည်လုံးရဲ့
သိက္ခာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ကမာ္ဘမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုတာနဲ့ ဗမာ လူမျိုးကိုဘဲ မြင်ကြတာပါ။ ရခိုင် တွေကို
ဘယ်သူမှ မမြင်ကြပါဘူး။ ဘုရားတရားကိစ္စခရီးသွားတဲ့ ဘာသာခြားတွေကို ရက်ရက်စက်စက် လူစု
လူဝေးနဲ့ သတ်ပစ်တဲ့ လုပ်ရပ် ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ တိုင်းပြည် သိက္ခာ ကို
အဖတ်ဆယ် မရအောင်လုပ်လိုက်တာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာတွေ အနေနဲ့ ရခိုင်တွေရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ လုပ်ရပ်ကို
ကာကွယ်ပေးနေစရာမလိုပါဘူး။ ကောမန့်တွေကို ကြည့်ကြည့်ပါ ရခိုင် တွေက ဂုဏ် တောင်ယူနေပါတယ်။
မဆီမဆိုင် ဗမာ တွေကို တောင် ဆဲနေပါတယ်။ မလေးရှား အင်ဒိုနီးရှား ဒူဘိုင်း စတဲ့ မူစလင် နိုင်ငံတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ရွှေတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး မူစလင်တွေ
ပေါက်ကွဲ အကြမ်းဖက်လာရင် ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ တွေ ပြေးစရာ
မြေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင် တွေ က သတ္တိကောင်းကြောင်း ဒီမှာ ကြော်ငြာ မနေပါနဲ့။
ရန်ကုန် မန်းလေး တို့လို မြို့ကြီးတွေမှာ မူစလင် အင်အား က ရခိုင်တွေ ထက်ပို
များပါတယ်။ ရခိုင် တွေကြောင့် ကုလား ဗမာ အရေးအခင်း မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ပါလက်စတိုင်းမှာ
၈ နှစ် ၉ နှစ် အရွယ် မူစလင် ကလေးတွေ က အစ္စရေးတင့်ကားတွေကို အသေခံပြီး
ခဲနဲ့ပေါက်နေတာ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးပါတယ်။ သူတို့ ဘာသာအတွက် သေရင်
ဂျာနတ်ဘုံ ကို ရောက်တယ်လို့ ယုံကြည်နေတဲ့ မူစလင် တွေ လူစိတ်ပျောက်သွားရင်
ရခိုင် လူမျိုး ဒီ ကမာ္ဘပေါ်က ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဖားသူငယ်တွေလို ရခိုင်တွေ
အာကျယ်မနေပါနဲ့။ ယုတ်မာတဲ့ရခိုင်တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေ လူမသတ်နိုင်
သလို အသတ်လဲ မခံနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ် ကိုယ့်ဟာကိုယ်သေကြပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာ တွေကိုလည်း မဆဲပါနဲ့။ မပတ်သတ်ပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီမှာ ရခိုင် တွေလာမရေးပါနဲ့တော့။
Foreign Resident says:
ကို Kaung Myat Kyaw ရေ
ကျနော်လည်း ၊ တောင်ဂုတ်သားတွေ ဒီတစ်ခါ လွန်သွားပီဆိုတာ လက်ခံပါတယ် ။
ဒီထဲမှာ ဗမာကိုပါ ဗလိုင်းဆဲနေတဲ့ ၊ တောင်ဂုတ်သား ကိုလည်း မကြိုက်ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ရခိုင်သွေးသားတွေကို ၊
ကျဉ်းထဲ ကျပ်ထဲမှာမှ ပစ်ထားရက်တဲ့ ၊ စိတ်ထားတော့ မရှိဘူးဆိုတာကို ၊
ရခိုင်သားတွေ သိအောင် တမင်ကို ဝင်ပြောပြတာပါ ။
” သူတို့ ဘာသာအတွက် သေရင် ဂျာနတ်ဘုံ ကို ရောက်တယ်လို့ ယုံကြည်နေတဲ့
မူစလင် တွေ လူစိတ်ပျောက်သွားရင် ရခိုင် လူမျိုး ဒီ ကမာ္ဘပေါ်က ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ် ”
အဲလိုတွေးပြီးတော့တော့ တစိမ့်စိမ့် ကြောက်မနေနိုင်ပါဘူး ။
” ယုတ်မာတဲ့ရခိုင်တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေ လူမသတ်နိုင်
သလို အသတ်လဲ မခံနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ် ကိုယ့်ဟာကိုယ်သေကြပါ ”
ကျနော်က မွန် တရုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပါ ။ ဒါပေမယ့် ။
ရခိုင် ညီအစ်ကိုတွေကို အဲလောက်အထိတော့ မျက်နှာလွဲခဲပြစ်တော့ မပြောရက်ပါဘူး ။
အဲလောက်တောင်မှ ဖြစ်နေဒါဆိုရင်လည်း ၊ ပြည်ထောင်စု မနေနှင့်ပေါ့ဗျာ ။
ဆိုလိုတာက ၊ တောင်ဂုတ်သားတွေ ဒီတစ်ခါ လွန်သွားတာ မှန်တယ် ။
ဥပဒေအရ အပြစ်ရှိသူကို အပြစ်ပေးသွားမှာပဲ ။
အေး ၊ ဒါပေမယ့် ၊ တောင်ကုတ် ရခိုင်ကို မျိုးဖြုတ်ပြစ်မယ် ၊
တောင်ကုတ်မြို့ကို မြေပုံပေါ်က ဖျောက်ပစ်မယ် လို့တော့ လာမလုပ်နှင့် ။
လက်မခံနိုင်ပါဘူး ။ လက်သည်းဆိပ်ရင် လက်ထိပ် နာပါတယ် ။
( ဒေါသ အလျှောက် သွေးပူတုန်း ပြောမိတာဆိုရင်တော့ လက်ခံပါတယ် )
” မပတ်သတ်ပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီမှာ ရခိုင် တွေလာမရေးပါနဲ့တော့ ”
အဲလိုလဲ ၊ မပြောရက်တာ အမှန်ပါပဲ ။
ရခိုင်က ထွက်လာတဲ့ ရွှေဂက်စ် ကြတော့ မြန်မာက တရုတ်ကြီးကို ရောင်းစားပြီး ၊
အခု ရခိုင်က အမှားတစ်ခု ခြေလွန် လက်လွန် လုပ်မိတော့မှ
အမျိုး မတော်ချင်တော့လို့ မရပါဘူး ။
ဆိုးလည်း အတူခံရမှာပါ ။ ကောင်းလည်း အတူစံရမှာပါ ။
လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင် ဖျောင်းဖျရမှာပါ ။
မိုးထဲလေထဲကျမှ ပစ်ထားမယ့် စကားမျိုး ၊ မပြောရက်ပါဘူး ။
minn zaw ယုတ်မာတဲ့ ရခိုင် (ရခိုင် အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ) တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို
ဗမာနဲ့ရခိုင် ညီအစ်ကိုတွေပဲ လို့ပြောပြီး ပခုံးဝင်မထမ်းပါနဲ့။ ရခိုင်တွေ ရဲ့လုပ်ရပ်ကို
ဗမာတွေ တာဝန်မယူနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ခေါင်းသုံးပြီး စကားပြောပါ။
Oo Oo says:
အမုန်းမီးတွေ မလောင်မှာဆိုးလို့ ဓါတ်ဆီလောင်းနေကြသလိုပါပဲလား…
ဘာမှန်းမသိပဲ မြေဇာပင်ဖြစ်သွားကြရရှာတဲ့ လူတွေအတွက် တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်၊
မီဒီယာတွေအနေနဲ့ ဒီလိုပိုးစိုးပက်စက် ဓါတ်ပုံတွေကို မြိန်ရည်ရှက်ရည် အကျယ်တဝင့်ဖေါ်ပြနေတာကိုတော့
ကျနော် လူသားတစ်ဦးအနေနဲ့ ဒီနေရာကနေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချုံ့ချ ပါတယ်။
အခုကိစ္စမှာ ရခိုင်လူမျိုးများ နဲ့ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ကုလားလူမျိုးတို့ သိထားသင့်တဲ့အချက်တစ်ချက်က..
ရခိုင်မိန်းကလေး တစ်ယောက် လူမဆန်စွာရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခံရတာကို မူစလင်ဘာသာဝင်ကုလားလူမျိုး
အများစုက ဖြစ်စေချင်မှာမဟုတ်သလို အခုလို မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ကုလားလူမျိုးအချို့ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခံရတာ
ကိုလည်း ရခိုင်လူမျိုးအများစုက ဖြစ်စေချင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သိထားသင့်ပါတယ်။
လတ်တလောအဖြစ်အပျက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီး အကြံသမားအချို့ရဲ့ အသုံးချ အမြတ်ထုတ်မှုတွေကြောင့် ရခိုင်ကောကုလားပါ
နစ်နာရမယ့် အရေးကိုမမြင်တွေ့လိုတဲ့ ဗုဒ္စဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေနဲ့ ဝင်ရောက်သတိပေးရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
Key Key says:
မိသားစု တစ်စုထဲက ညီအစ်ကို မောင်နှမ အရင်းအချာတွေ ထဲမှာတင် အရည်အချင်းအမျိုးမျိုး၊ စရိုက်အမျိုးမျိုး မတူညီနိုင်ပါဘူး၊
လူမျိုးအရတော့သတ်မှတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး၊ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့်မြို့နယ်၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည် မှာရှိတဲ့ လူအချင်းချင်း ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်၊ ကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်ရှိအောင် ရိုင်းပင်းကူညီရမှာပါ။
ကိစ္စတစ်ခုခု ရှိလာပြီဆိုရင် ကိုယ့်သွေးသားရင်းက အပြစ်လုပ်မိရင်တောင်သူလုပ်တဲ့အပြစ်ခံယူနိုင်အောင် ဆွေးနွေးပြီး အပြစ်ခံယူနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးရမှာပါ။ အပြစ် တစ်ခု လုပ်မိရာက နောက်အပြစ်တစ်ခု ထပ်မပိုစေရအောင်ပါ။
သက်ဆိုင်ရာအရေးယူမှုတွေမှားယွင်းနေရင် အမှန်ဖြစ်အောင် ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ရနိုင်တဲ့ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သတင်းမီဒီယာတွေကတစ်ဆင့်အကူအညီယူတာကပိုကောင်းမှာပါ။
ကိုယ့်မိသားစုထဲကလူ စော်ကားတာခံရရင်လည်း အပြစ်ရှိတဲ့သူကို သေသေချာချာအရေးယူနိုင်အောင်၊ နောက်တစ်ကြိမ် အလားတူအဖြစ်ဆိုးတွေမဖြစ်အောင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ ဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရမှာပါ။
ကိုယ့်ဒေါသကြောင့် ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ဆဲဆိုနေတာ ကိုယ့်မိဘဆွေမျိုးတွေဖတ်မိရင်တောင် ကိုယ့်မိဘကိုယ်ဆဲ သလိုဖြစ်နေတာမို့ အရမ်းဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
ဒေါသကြောင့် အမှားတွေထပ်လုပ်နေရင် ဘယ်သူ့အတွက်မှ ကောင်းကျိုုးမရှိနိုင်တာမို့သတိပြုဆင်ခြင်ကြရအောင်…။
မှန်ပါတယ် key key ရေ။
ဟူး……. ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ရင်ထဲ မကောင်းလိုက်တာ။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး
ရဲ့ သာသနာတော်ကြီးကို ညစ်နွမ်းအောင်လုပ်တဲ့ လူတွေ အကျွတ်တရားရပါစေ။
Foreign Resident ညီလေး
ညီလေး က ဗမာ အစစ်မဟုတ်ဘူးနော် မွန်တရုတ် ကပြားနော် မွန်တရုတ် ကပြားနဲ့
ရခိုင် ဘယ်တုန်းက ညီအစ်ကိုတော်သွားသလဲ တော့ အကိုမသိဘူးဗျာ။
စိတ်မရှိနဲ့နော် ညီလေး အဲဒီလောက်ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းတဲ့ တောင်ကုတ်ရခိုင်တွေ
ကိုတော့ ညီအစ်ကို မတော်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ ညီလေး ညီအစ်ကို တော်ပြီး တူတူသတ်
တူတူသေချင်ရင် တော့ ညီလေး သဘောပေါ့။ ရခိုင် တွေ က ပြည်မကြီးက ခွဲထွက်
ချင်နေတာ ညီလေးမသိဘူးထင်တယ်ကွာ။ ရခိုင် ၄၊ ၅ ယောက် က အဲဒီ အမှု
ကျူးလွန်ခဲ့ရင် အကိုလဲ အပြစ်ရှိသူတွေကို အပြစ်ပေးရမယ် ပြောမှာပါ
အခု က ရာနဲ့ချီတဲ့ တောင်ကုတ် က လူတွေဝိုင်းလုပ်တာဆိုတော့ ဒါက မိုက်ရိုင်းလွန်း
သွားပြီ ညီလေး။ အကို က တော့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
သတ်လဲ မသတ်နိုင်သလို ဥပစ္ဆေဒကံ နဲ့ အသေမခံနိုင်ဘူး ညီလေးရယ်။
မောင် ကောင်းမြတ်ကျော် ရေ
အဖေ ထက် သား တစ်လကြီးတဲ့
မင်း က ညီလေး ဆိုပြီး ” ဆ ” ဆရာကြီး ပုံမျိုးနဲ့တစ်လကြီးပြနေတဲ့
Foreign Resident ဟာ မင်း အဘိုးထက်တော့ မငယ်လောက်ပါဘူးကွယ်။
မင်းက ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစစ်ဖြစ် သတဲ့လား ။
ဦးဖောကြီး က နို ့နံ ့မစင်သေးတဲ့ အပြင်းစား ကွန်ဆာဗေးတစ် လက်သစ်တွေကိုမှ
သွားပြီး ရွှေပြည်အေး တိုက်ကြွေးနေမိသကိုး
ကိုသစ်မင်းတို့၊ ငဇာဂီ တို့ဒီ အချိန် မျက်ရည် ဘူးသီးလောက် ကျနေပြီ ထင်ပါရဲ ့
nigimi77 ရော ရခိုင်ဘဲလားညီလေး
သူကြီးရေ လာပါတော့ .. ရွာသူားတွေ တမော့မော့ … :grin: :grin:
Foreign Resident ဆိုတာမင်းအဖေထက်တောင်အသက်ကြီးသေးတယ်။နောက်လေ့လာပီးမှဝင်ပြော
Kaung myatr kyaw ဆိုတဲ့ကောင် ………………
captainamerica ညီလေး အကို့အသက်ကိုရောသိလို့လားဗျာ း)
ညီလေးလဲ ရခိုင်ဘဲထင်တယ်နော် စကားလုံးတွေက ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းနေလို့
ကိုကောင်းမြတ်ကျော်ခင်ဗျာ…အကိုက ရခိုင်တွေကို အရိုင်းအစိုင်းတွေ လို့မြင်နေပုံရတယ်နော်..
တာကိုအကိုသတိမပြုမိဘူးထင်တယ်နော်..အကိုကြုံတွေ့ဖူးတဲ့ လူတစ်ယောက်၊လူတစ်စု ရဲ့အပြုအမူကိုကြည့်ပြီး
လူမျိုးတစ်စုလုံးကိုပုတ်ခတ်တာကတော့ မကောင်းပါဘူး..ကျနော်က ရခိုင်လူမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ်
ညီလေး အကို စစ်တွေမှာ တာဝန်နဲ့ ၅ နှစ်နေဖူးပါတယ်ကွာ ရခိုင်တွေယဉ်ကျေးလားရိုင်းလား
ညီလေး ထက် အကိုပိုသိပါတယ် ညီလေးကိုယ်တိုင်က ရခိုင် တစ်ယောက်ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယဉ်ကျေးတယ်ဘဲ ထင်မှာပေါ့
ဒါပေမဲ့ ညီလေးကတော့ မရိုင်းလောက်ဘူးလို့ အကိုထင်မိပါတယ်
ပြောရရင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေခက်ခဲမှုကြောင့် ဒေသခံတွေကခေတ်နောက်မှာကျန်နေခဲ့ကြတာလို့တော့မြင်မိတယ်
ကျုပ်တို့နိုင်ငံကြီး ဆင်းရဲတာတွေ မွဲတာတွေ နောက်ကောက်ကျတာတွေ
ဒါတွေကို သိပ်ပြီးတော့ မထူးဆန်းလှဘူး ဖြစ်ထိုက်ပါတယ်လို့ တွေးမိတာပါဘဲ
လူသားတွေက လူသားဥပဒေကိုချိုးဖေါက်ပြီး ပြုမူတဲ့လုပ်ရပ်ကို လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့
တရားဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူဘို့လည်း တောင်းဆိုမိပါတယ်
ဘာသာရေးအရဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ ကျုပ်က အဲ့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့
အမည်ခံထားတဲ့ ကျုပ်တို့ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့အဆုံးမတော်မြတ်နဲ့
စံထွန်းကျော် ညီလေး (သို့) အစ်ကို မင်းကိုတော့ အားနာပါတယ်ကွာ. မင်းက ရခိုင်ပြယ်နည်မှာ မွေးတာလား .. ဒါမှမဟုတ် အဲဒီပြည်နယ်ထဲက အလေးအလွှင့်နေရာမှာ မွှေးတာလာတော့ ငါမသိဘူး.. မင်းကို သိစေချင်တာက မင်း အဘိုး. အဖ . အမိ. တွေ့က ဘယ်က လာတယ်. ဘယ်ကိုရောက်လို့ မင်းဆို့တဲ့ စံထွန်းကျော် ဆိုတဲ့ ကုလားအစစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို မင်းရဲ့ အဖေ အမေကို မေးကြည့်လိုက်ပါလား…
kai on IC ရေ.. သေပြီဆရာ..။
manawphyulay on Let’s Start Our Own Library – ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်လေး ထူထောင်ကြရအောင်
kai on အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဧပြီ ၂၀၁၄
manawphyulay on မေ့ထားလိုက် တခြားအရာတွေ
Mon Lay on အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်လိုသော် (၂၁) Learn to Speak English
manawphyulay on Learn to Speak English (19) – Prof; Myo Kyaw Myint
manawphyulay on နေ့ဆီကို အမြန်ရောက်ချင်နေတဲ့ည
Mon Lay on အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးမယ့် စေ့ဆော်ချက်များ
သင့်အေးရိပ် on အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်လိုသော် (၁၈) Learn to Speak English
သင့်အေးရိပ် on မြန်မာ့ဂဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
သင့်အေးရိပ် on နေ့ဆီကို အမြန်ရောက်ချင်နေတဲ့ည
Mon Lay on အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်လိုသော် (၁၇) Learn to Speak English – Prof; Myo Kyaw Myint
manawphyulay on သမီးကို သိစေချင်သော ရင်ထဲက စကားများ
manawphyulay on မြန်မာ့ဂဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၂၁ နိုဝင်ဘာ
manawphyulay on အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်လိုသော် (၁၇) Learn to Speak English – Prof; Myo Kyaw Myint
သင့်အေးရိပ် on အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်လိုသော် (၁၆) Learn to Speak English (16)- Myo Kyaw Myint
aye.kk on ကြွားပါရစေ
aye.kk on မချစ်မမုန်း အကောင်းဆုံးတည်း…
Shar Thet Man (121298 Kyats )